Black Shark 2, ihe ngosi izizi nke anụ ọhịa egwuregwu a | Gam akporosis
Worldwa nke ekwentị mkpanaaka nwere ọtụtụ dịgasị iche iche, ọtụtụ na ndị ọzọ, ọ bụkwa na ndị ọrụ niile enweghị mmasị na otu ọrụ na arụmọrụ, nke otu ndị maara nke ọma Black Shark, nke ulo oru a ọnụ nnọọ lekwasịrị anya a kapịrị ọnụ na-ege ntị, ọhaneze nke gamers.
Anyị nwere n'aka Black Shark 2, mbipụta nke abụọ nke ekwentị kacha egwu egwu, anyị na-ewetara gị mbata na mbido mbụ anyị banyere ọdụ a. Anyị na-akpọ gị òkù ka ị kwụsị ka ị lelee ya nke ọma, nọrọ ọdụ n'ihi na anyị nwere ọtụtụ ihe ịgwa gị gbasara Black Shark 2, ị ga-atụ uche ya?
Ka ọ dị na mbụ, Anyị ga-eje ije na echiche mbụ na ọ hapụrụ anyị, mana karịa ihe niile m na-akwado ka ị gafere vidiyo nke anyị dere, ị ga-enwe ike ịhụ n'ụzọ zuru ezu arụmọrụ ndị akọwapụtara nke Black Shark 2 a, na karịa ihe niile, lee ndụ etu akụkụ ụfọdụ si arụ ọrụ dị ka igwefoto ma ọ bụ ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ihuenyo ahụ, mana ana m echetakwara gị na anyị bụ Tupu kọntaktị mbụ, n'izu na-abịa, anyị nwere olile anya iji wetara gị nyocha miri emi mgbe anyị jiri ya dịka mkpanaka onwe gị ruo izu abụọ zuru ezu, ka ọ dị ugbu a, ị nwere ike ịzụta ya HERE maka naanị € 549.
1 Akụrụngwa: Ike a na-achịkwaghị achịkwa abaghị uru
2 Uzo a doro anya nke oma
3 Gịnị na-eme ya egwuregwu ekwentị?
4 Ọ bụghị ihe niile bụ ọkụ, enwerekwa onyinyo
Akụrụngwa: Ike a na-achịkwaghị achịkwa abaghị uru
Na Black Shark, ha achọghị ka ọ dị nkenke na ngwaike nke ọnụ ha, n'ihi nke ahụ, ọ nwere ụfọdụ njirimara njirimara dị ka AMOLED panel, ikike nke 128GB nchekwa ntinye na ọbụlagodi 8 GB nke Ram. Ihe ndị agbakwunye, mana ha maara na ike na-enweghị njikwa enweghị isi, ọkachasị mgbe ị na-eche ndị na-ege ntị ntị dịka ọ na-achọ onye na-eme egwuregwu, n'ihi ya ọ na-aga aka-na-aka na ya ngwaike.
Nka na ụzụ nkọwa Black Shark 2
Eke Black Shark
Usoro njikwa Achịcha Akara 9
Ihuenyo 6.39 "AMOLED - 1080 x 2340 (Full HD +) mkpebi maka 403 DPI
Ihe nhazi na GPU Snapdragon 855 - Adreno 640
Igwefoto na-aga n'ihu Igwefoto igwefoto 12 MP nwere f / 1.75y na AI - Zoom x2 na Eserese
Igwe n'ihu 20 MP nwere f / 2.0
Njikọta na mgbakwunye WiFi ac - Bluetooth 5.0 - aptX na aptX HD - GPS abụọ
Nche Na - agụ akwụkwọ mkpịsị aka ntanetị - Nchọpụta ihu ihu ihu
Batrị 4.000 mAh na Ndenye Nchaji 4.0 - 27W site na USB-C
Ahịa Site na euro 549
Obi abụọ adịghị ya, anyị agaghị echefu ihe ọ bụla na Black Shark 2 aỌ bụ eziokwu na anyị na-eche ihu ngwaike nke na-adịghị enwe anyaụfụ kachasị elu, yana ọdịiche dị na nke a na anyị nọ n'okpuru euro 600.
Uzo a doro anya nke oma
Dị ka ọnụ Ịgba Cha Cha Anyị kwesịrị ịkọwa nke ọma na e nwere ihe atọ na-enweghị ike ịkọ na ọkwa nhazi ahụ: Iwe, ọkụ LED na-enwu gbaa. Black Shark a 2 na-ezute ihe atọ dị mkpa nke ngwaahịa ọ bụla na-egwu egwuregwu ga-enwerịrị ụlọ. Ijuanya ya ngwakọ constriction n'etiti metal na iko na-enye ngụkọta ịdị arọ nke gram 205, N'ezie, Black Shark 2 a abụghị ọkụ, ọ bụ ezie na batrị ahụ ga-enwe ọtụtụ ihe ikwu banyere ya.
Anyị nwere ngwaọrụ nwere okpukpu abụọ dị ala na nke dị elu na ihuenyo ahụ, ọ dị nnọọ ukwuu, sie ike iji otu aka na tỌ nwere akụkụ nke 163,61 x 75 x 8,77 millimeters, ọ na-apụta ìhè karịa ya niile ọkpụrụkpụ, ọ bụ ezie na a na-agbadata ya n'ụzọ ziri ezi iji mee ka ọ dị mfe ijide. Anyị nwere bezel bepụ nke na-eme ka anyị hụ obere ahịrị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, akara ngosi nke ika ahụ, yana bọtịnụ eji eme ihe iji megharịa "ọnọdụ egwuregwu", nke anaghị adị mfe ịrụ ọrụ. Maka onye nwere P30 Pro mgbe niile, Galaxy S10 ma ọ bụ iPhone XS dị n'aka ha, nke bụ eziokwu bụ na ha na-awụ akpata oyi n'ahụ otu Black Black Shark 2 si aga nke ọma.
Gịnị na-eme ka ọ bụrụ ekwentị igwu egwu?
O doro anya na ọ bụ ekwentị Ịgba Cha Cha ị chọrọ ihe karịrị nanị akụkụ LEDs na ikike inwe azụ "S" na-enwu mgbe niile. Maka nke a anyị na-amalite site na a okwu ihu abụọ na-enye ụda stereo siri ike karịa, Agbanyeghị, mmetụta mbụ ọ na-ahapụ anyị bụ na ha tinyere ihe niile n'ike, ma eleghị anya ọ nweghị ntakịrị mma. Na AMOLED FHD + panel dị ịtụnanya, ọ na-enye ọdịiche dị iche iche na nchapụta ọhụụ, agbanyeghị na ọ dị nso na 120 Hz enwere ike ịchọrọ ngwaahịa egwuregwu, na nke a anyị ga-enwe 90 Hz na mkpokọta.
Anyi nwere ihe nlele aka nke aka H 240 Hz iji nweta ihe ọ theụ allụ niile, yana usoro vibration Master Touch, na-enye mmetụ nke ịma jijiji ebe anyị pịa, dị ka a ga - asị na ọ bụ bọtịnụ anụ ahụ, ọ masịrị m nke ukwuu ebe ọ bụ na ọ bụ naanị ihe ị na - ahụ na iPhone. O doro anya na ọ dị anya na Apple's Taptic Engine, ma site na m si ele ya anya, ọ bụ ihe kachasị mma m nwetụrụla na gam akporo.
Jụrụ dị ezigbo mkpa, anyị nwere mmiri mmiri jụrụ oyi nke ga-ejigide ọnọdụ okpomọkụ ya. O sina dị, ọ bụ Shark Space interface nke na-enye anyị ohere ị nweta arụmọrụ niile na ya, Anyị nwere njikwa abụọ (nke anyị anwalebeghị) maka ahụmịhe onye ọrụ zuru oke. Site na iji bọtịnụ ahụ, a na-arụ ọrụ Dock Game ebe anyị ga-enwe ike ịnweta ngwa ngwa egwuregwu anyị ngwa ngwa, yana hazie ụfọdụ atụmatụ dị ka iwepu amamọkwa, ịkwụsị ụfọdụ ọrụ mpụga, ma ọ bụ ihicha RAM ka anyị wee nwee nchegbu maka igwu egwuregwu, nke a bụ isi.
Ọ bụghị ihe niile bụ ọkụ, enwerekwa onyinyo
Agbanyeghị, iji nye ụdị ngwaahịa a "ezigbo" na ọnụ ahịa ezi uche dị otu a, Black Shark ebipuwo n'akụkụ ụfọdụ. Nke mbu bu igwefoto, nke n'agbanyeghị na enwere ụdị ọrụ Xiaomi, na-enye anyị nsonaazụ ndị ọzọ na-ahụkarị nke etiti, na ọnọdụ ọkụ dị mma ọ na-agbachitere onwe ya, ihe gbanwere mgbe anyị rịọrọ ka ntakịrị ya, nhazi ihe oyiyi ahụ karịrị akarị na ọnọdụ ọ bụla, nke na-egbochi ịse foto ndị sitere n'okike, ọ na-aga n'ekwughị na na selfie mode, ebe mmetụta ịma mma ọ na-aghọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nkwanye ùgwù.
Onye na-agụ ihe ntanetị na ihuenyo dị, mana ọ naghị asọmpi nke Huawei P30 Pro nyere maka ihe atụ ma ọ bụ Samsung Galaxy S10, ekwentị ndị dị oke ọnụ karị, ọ bụ eziokwu, mana onye nyocha ihe mkpịsị aka on-screen na-enyekwu ọsọ na nkenke. Ọ bụ ihe mmetụta mkpịsị aka zuru ezu, mana ọ ga-ada n'ọnọdụ ụfọdụ (ọ ka nwere ihe jikọrọ ya na onye nchebe nke otu m tinyegogo dị ka ọkọlọtọ). Nke a bụ ihe m "nwere ike ịgwa gị" ka anyị na-aga n'ihu na-enyocha ya, anyị na-echetara gị ka ị kwụsị n'ime otu izu iji hụ nyocha nke ọma.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Black Shark 2, mmetụta mbụ nke anụ ọhịa egwuregwu a
Lenovo Z6 Pro Ferrari Edition: nke a bụ mbipụta ọpụrụiche pụrụ iche nke mbinye aka mbinye aka